घट्दैछ नेपाल-भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा ‘रोटी-बेटी’ को सम्बन्ध ! – HamroSamrachana
हाम्रो संरचना । २६ बैशाख २०७४, मंगलवार ०८:०२
भारतीय ज्वाइँहरू ससुराली आउँदा आफ्नै गाडी चढेर नेपालका ठाउं सम्म पुग्न सक्छन्, भन्सारमा शुल्क तिरेपछि भारतीय गाडीले सजिलै नेपालमा प्रवेश पाउँछन् ।
नेपाली ज्वाइँहरू आफ्नै गाडी भए पनि त्यो लिएर ससुराली भारत जान सक्दैनन् । नेपाली नम्बरका गाडीहरू भारत प्रवेशका लागि काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासबाट अनुमति लिनुपर्छ । नेपाली नम्बरका गाडी लिएर जन्ती जान पनि दूतावासको अनुमति चाहिन्छ ।
“पहिला त यो सीमा हो । यो भूमि नेपाल हो र यो भारत हो भन्ने पनि थिएन” करीब साढे तीन दशकअघि नेपाली युवासँग विवाह गरेर आएकी अधिकारकर्मी तथा पूर्वसभासद् मोहमदी सिद्दिकी भन्छिन्, “एक-अर्को देशमा विवाह भएको अनुभूति पनि हुन्थेन । अहिले पनि औसतमा दैनिक दुई-तीन वटा बाराती (जन्ती) सीमा वारपार गरिरहेकै देखिन्छ ।”
नेपालको तराईका जिल्लाहरूमा बसोबास गर्ने मधेशी समुदायका छोराछोरीको बिहेवारी सीमावर्ती भारत तथा भारतीयको विवाह नेपालतर्फ हुँदै आएको छ । एकै खाले सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशका कारण सीमा वारपार हुने बिहेवारीलगायतका यस्ता सम्बन्धका कारण नेपाल र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाबीच ‘रोटी-बेटी’ को सम्बन्ध रहँदै आएको छ ।
सिरहा नगरपालिका–२ का दीपक साहले पनि दुई वर्षअघि भारतको चर्चित धार्मिकस्थल वैद्यनाथ धामकी रीतिकालाई मिथिला परम्परा अनुसार विवाह गरी नेपाल भित्र्याए । “आफन्तहरू माध्यम बने, गोत्र पनि मिल्यो” विवाहबारे दीपकले सुनाए । सिरहा नगरपालिका–१ का राम अग्रवाल वैदेशिक रोजगारमा थिए । त्यहाँबाट फर्केपछि घरजम गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा रहेका उनले यहाँ खोजेजस्तो युवती भेटेनन्, अन्ततः भारत सुपौलकी युवतीसँग उनको विवाह भयो ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२७ पुरैनास्थित महाराज माविका पूर्वप्रधानाध्यापक समेत रहेका लखेरका अनुसार सीमा वारपारको बिहेवारीमा नातेदारहरूको भूमिका प्रमुख हुने गर्छ । भारतबाट बिहेवारी भएर नेपाल आउने चेलीको संख्या यताबाट बिहेवारी भएर भारतमा जाने नेपाली चेलीको भन्दा बढी छ । लखेरको अनुमानमा त्यो अनुपात ६०/४० हुनुपर्छ । ठ्याक्कै कति संख्यामा भारतीय चेली नेपालीसँग विवाह गरेर भित्रिएका छन् र कति नेपाली चेली भारतीयसँग विवाह गरेर बाहिरिएका छन्, त्यसको यकिन सरकारी तथ्याङ्क छैन ।
सबैभन्दा धेरै अंगीकृत नागरिकता वितरण भएका १० जिल्लाको विवरण :-
पर्सा ४९४६७, कपिलवस्तु ४०२४६,सर्लाही३६९३७, धनुषा३००१६,रूपन्देही२७११५,
बारा २६०२८,रौतहट२१६९५,महोत्तरी२०६३६,नवलपरासी१९९०६,सिरहा १९१०७/
सीमा वारपार विवाह भएकाको संख्या नागरिकता वितरणका आधारमा मापन गर्न नसकिने बताउँछिन् पूर्वसभासद् सिद्दिकी । “तीन वर्षअघि नेपालगन्जकै सेरोफेरोमा रहेर गरिएको एक अध्ययनमा भारतबाट विवाह गरेर आएका थुप्रै महिलाको नागरिकता नभएको भेटिएको थियो” फातिमा फाउन्डेसनको संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेकी सिद्दिकीले भनिन्, “कतिपयमा चेतनाको अभाव र कतिपयले सम्पत्तिमा हक माग्छन् भनेर महिलाको नागरिकता नै नबनाइदिने गरेका छन् । सीमा पारिबाट बिहे गरेर ल्याएकाको मात्र होइन नेपालकै धेरै विवाहित महिला नागरिकताबाट बन्चित छन् ।”(वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता वितरण भएका प्रमुख १० जिल्लाको २०७३ असार मसान्तसम्मको विवरण । स्रोत:गृहमन्त्रालय नागरिकता शाखा ।)
पूर्वसभासद् सिद्दिकीका अनुसार सीमा वारपार बिहेवारीले सीमावर्ती क्षेत्रमा एक किसिमको सामाजिक सद्भाव कायम राखिराख्न सघाउ पु¥याएको छ । विश्वका धेरै मुलुकका सीमा क्षेत्रको तनावको तुलनामा खुला सीमा रहे पनि नेपाल–भारतबीच छिटफुट घटनाबाहेक आपसी सद्भाव कायम छ । २०६६ माघमा माओवादीले भारतीय झण्डाको अपमान हुने गरी नेपालगन्जमा पोस्टरहरू टाँसे ।
त्यसबाट भारतीय जनताको स्वाभिमानमा चोट पुगेको भन्दै रुपैडिया उद्योग वाणिज्य संघका तत्कालीन अध्यक्ष छेदीलाल मधेशियाको अगुवाइमा सीमावर्ती रुपैडिया बजार बन्द गरियो । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइयो । त्यसपछि कुनै एक राजनीतिक दलका कारण दुई देशको सम्बन्धबीच असर पर्दैन भन्ने सन्देशसहित पिस फर नेपालका अध्यक्ष डा. सुशील कोइरालाको अगुवाइमा बाँकेको नागरिक समाजले सीमावर्ती रुपैडियाका व्यापारी, नागरिक समाजलाई गुलाबको फूल दिएर अंकमाल गरे, माफी मागे ।
सीमापारि भारतीय सुरक्षा निकायबाट कुनै नेपाली कुटिंदा पनि रुपैडियाका व्यापारीले बजार बन्द गरेका छन् । उनीहरूले आफ्नै सुरक्षा निकायविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् र प्रशासनलाई दबाब दिएर माफी माग्न तथा पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन बाध्य पारेका छन् ।
ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक इन्दुशेखर मिश्रका भनाइमा, “अघिल्लो पुस्तासम्म नेपाली समाजको रहनसहन स्तर छिमेकी भारतीय समाजको भन्दा उच्च मानिन्थ्यो । सीमित आय भए पनि छिमेकी नेपाली समाजको जीवनस्तर लोभलाग्दो थियो ।
अहिले छिमेकी भारतीय समाजमा छिटोछिटो मध्यम वर्गको उदय भइरहेको छ । जसको प्राथमिकता अब नेपाली समाज रहेन । हिजो मधेशी समाजमा सरकारी जागीर एउटा आकर्षणको विषय थियो । सुरक्षा अवस्था राम्रो थियो । छिमेकी भारतीय समाजमा चलनचल्तीमा रहेको भन्दा दाइजो पनि न्यून थियो । ती परिवेशहरूमा अहिले थुप्रै परिवर्तन आइसकेको छ ।”
मिश्र भन्छन्, “शिक्षा, चेतना र राज्यमा पहुँचको हिसाबले पनि मधेशी समाज अहिले फैलिंदो क्रममा छ । हिजो सीमित मात्राको उत्तर–दक्षिणमा हुने विवाहलगायतका सम्बन्धहरू अहिले पूर्व–पश्चिमसम्म फैलने क्रममा छन् । हिजो वयलगाडाले निर्धारण गर्ने दूरीमा कायम हुने सम्बन्धहरूलाई आज यातायातका साधनले फराकिलो बनाउँदै लगेको छ । यतिसम्म कि २०६४ सालसम्म आइपुग्दा राजधानी उपत्यकामा पनि मधेशी समुदायको उपस्थिति ह्वात्तै बढेको छ । समाज फैलने/विस्तार हुने क्रमले विवाहलगायतका सम्बन्धहरूमा पनि पर्याप्त विकल्प जन्मिन थाले ।”
नेपालमा माओवादी द्वन्द्व चर्कंदै गएपछि सीमा पारिबाट नेपालतर्फ विवाह गरिदिने प्रचलनमा देख्न सकिने गरी कमी आएको हो । त्यसबाहेक सीमा वारपारको बदलिंदो आर्थिक विकास, सीमाका नियमहरूले पनि त्यसमा असर पु¥याएको छ ।
भारतीय ज्वाइँहरू ससुराली आउँदा आफ्नै गाडी चढेर नेपालका गाउँगाउँसम्म पुग्न सक्छन्, भन्सारमा शुल्क तिरेपछि भारतीय गाडीले सजिलै नेपालमा प्रवेश पाउँछन् । तर नेपाली ज्वाइँहरू आफ्नै गाडी भए पनि त्यो लिएर ससुराली भारत जान सक्दैनन् । नेपाली नम्बरका गाडीहरू भारत प्रवेशका लागि काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासबाट अनुमति लिनुपर्छ । नेपाली नम्बरका गाडी लिएर जन्ती जान पनि दूतावासको अनुमति चाहिन्छ ।
सीमावर्ती भारतको पथरगाढामा रहेको गिरबल उच्च विद्यालय का संस्थापक जगन्नाथ यादवले नेपालमा चर्केको माओवादी सशस्त्र युद्धका कारण सीमा वारपार विवाहमा कमी आएको बताए । भारतीय पत्रकार इन्द्रमोहन मिश्रकी बहिनी राजलक्ष्मीको सीमावर्ती नेपाली गाउँ देउरीपट्टीमा विवाह भएको छ । “तर विश्वमै शान्त मानिने नेपालको राजनीतिक उथलपुथलले सीमा वारपारको वैवाहिक सम्बन्धमा पनि एक प्रकारको तनाव निम्त्याएको छ”, मिश्रले भने ।
नेपालबाट पनि भारततर्फ छोरी–चेलीको विवाह गरिदिने क्रममा कमी आएको शिक्षक अरुण पासवानको बुझाइ छ । भारतीय गाउँबाट विवाह गरेका उनी छोरीको विवाह भने नेपालमै गर्ने बताउँछन् । ब्रजमोहन जनता माध्यमिक विद्यालय माडरका शिक्षक सोमा गुप्ता, उच्च शिक्षा हासिल गर्ने छात्राहरूले भारतमा भन्दा नेपालमै विवाह गर्न चाहेको बताउँछन् । गुप्ता भन्छन्, “नेपालीपनको बोध, बदलिंदो जीवनशैलीको कारण अहिले यताका केटीहरू उता विवाह गर्न हिच्किचाउने गर्छन् ।”
जिवनका लागि कोरोनासंग संघर्ष जारि: बांकेमा ३ जना आइसियु, ४४ जना आइसोलेसन र ८८८ जना क्वारेन्टाइनमा
…सोल्टी होटलबाट ६ के.जी.९६७ ग्राम अफिम सहित ४ जना व्यक्ति पक्राउ
चार एआईजी बढुवा
कांग्रेसले सबै क्षेत्रका उम्मेदवार टुंगो लगायो
मा.बि. पछी २५ सय ९८ नि.मा.वि. शिक्षकका लागि पनि विज्ञापन खुल्यो….